Inta badan, baahida loo qabo in u kacaya inuu u badalo file ka ay qaab MP3 jira in MP4. Looga baahan yahay waxaa laga yaabaa in ay sabab u kac dhowr sababood. Qaar ka mid ah ciyaartoyda u muuqdaan in ay si fudud iyo tayada fiican u akhri file MP4 ah. Wixii xirfadlayaasha ka shaqeeya goobtan, oo tayo leh waa shuruud sare mudnaanta in loo baahan yahay fulinta. Xaaladahan oo kale, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo MP3 in converters MP4. Mid ka mid ah ka heli kartaa qaar ka mid ah converters online. Haddii aad tahay si loogu badalo aad file qaab la doonayo awoodin, waxaan leenahay xoogaa tallaabooyin ku qoran kuu ay weheliyaan Screenshot si sahlan loo raaco.
Part1: Sida loo jar / milmaan / Beddelaan MP3 galay MP4
Part2: Options More for MP3 in converters MP4
Tallaabada 1 Download iyo rakibi Wondershare Video Converter Ultimate
Wondershare Video Converter Ultimate Lagala soo bixi karaa 'wondershare.com'. Codsiga waxaa laga soo degsan karaa Windows iyo MAC. Ka dibna waxaad ku rakibi karaa Wondershare Video Converter Ultimate adigoo raacaya talaabada degdeg ah talaabo. Waxaa diinta qaabab video kala duwan, mid ka mid ahna MP4. File ayaa la gediyay loo isticmaali karaa qalabka kala duwan sida Apple, Samsung, iwm Ma jiro waayi maayo tayada iyo gol dheeraad ah faylka la gediyay. Sidoo kale, Converter waxay u shaqaysaa xawaare ka badan xawaaraha oo dhan converters kale 30 jeer.
Tallaabada 2 Import MP3
Tallaabada 3 Goo / midowdo MP3
Tallaabada 4 MP3 badalo galay MP4
Talaabada 5 dhoofinta MP4
Halkan, waxaan ku qor dheeraad ah fursadaha loogu MP3 in converters MP4 loogu talo galay dadka. Waxaad dooran kartaa ka tiro ka mid ah converters inay buuxiyaan shuruudaha aad.
Waxaa jira xarunta si ay u isticmaalaan qaar ka mid ah qaabab kala duwan diinta oo ay la socdaan ikhtiyaarka ugu fiican u MP3 in ay diinta ka MP4.
Xawaaraha ee diinta waa arrin cajiib ah, waxay ka caawisaa in raadsanayaa users dheeraad ah.
Kuu ogolaanayaa diinta ka mid ah in ka badan hal file waqti.
In kastoo ay ku leedahay soo saarista codka ka feature video markii u beddelaya MP4 ka MP3 inta badan waxa aanu si fiican u shaqeeyaan.
Users ma aha inaad bixiso diinta kasta, eegin jeer ay badalo file ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xadaynta cabbirka faylka
Waxay caawisaa in Customization user argument audio marka laga soo gudbo MP3 in MP4.
Xawaaraha ee Masiixiga waa su'aal oo marar badan ah, faylasha la gediyay aysan soo bixi gal folder la doonayo.
3. Online badalo:
Speed ​​diinta waa mid cajiib ah, waxaana uu ka caawiyay horumarinta macaamiisheeda xoog leh.
Beddelaad file Multiple waa u suurtoobaan.
Tayada gediyay MP3 files maaha wax dhibaato ah.
Waxay leedahay tiro ka mid ah qaababka la heli karo si ay sida ugu wax soo saarka.
Shirkada ayaa u leeyihiin nidaamka taageerada email ah waa la yaab leh.
Xaddidaadda size File tago users badan oo sare oo qalalan.
4. MP3 qalabeed:
File ah wuxuu helaa bixi in aad 'download' folder. Qaybsi warbaahinta bulshada waa la heli karaa.
Tayada file saarka MP4 maaha wax dhibaato ah.
Xawaaraha Wareejinta waa wax loo bogo.
File Xadidida waa dhibaato, laakiin suuqa of MP3 converters ka fiirsaneysa, ma ahan mid lala yaabo a.
> Resource > MP4 > Sida loo jar / milmaan / Beddelaan MP3 galay MP4